ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အကြီးအကဲ ကို ထောင်ထဲပို့
ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အကြီးအက...
16 มิ.ย. 2561 - 15:01 น.
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလတုန်းက ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်အောင်နိုင်ရေး မန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ပေါလ်မန်းနဲဖော့တ်ရဲ့ အာမခံဟာ ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပြီး အချုပ်နဲ့ ထောင်မှာသွားနေဖို့ ဝါရှင်တန်ဒီစီက တရားသူကြီးတဦးက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
သမ္မတထရန့်ကတော့ တရားရုံးရဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး အလွန်မမျှတတဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်ကာ မန်းနဲဖော့တ်ကို စစ်ဆေးစီရင်နေမှုဟာ မပြီးဆုံးသေးဘူးလို့လည်း ထောက်ပြပါတယ်။
သမ္မတထရန့်ရဲ့ ရှေ့နေ ဂွီလာနီကတော့ နောက်အပတ်မှာ ပြုလုပ်မယ့် ထရားခွင်မှာ ထွက်ဆိုရမယ့် သမ္မတထရန့်အတွက် ဒါဟာ အခွင့်အလမ်းကောင်းတခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နယူးယောခ့်မြို့တော်ဝန်ကတော့ သမ္မတထရန့်အနေနဲ့ အဲဒီတရားစီရင်စစ်ဆေးမှုမှာ သွားရောက်ဖြေဆိုစရာ အကြောင်းမရှိသလို မသွားသင့်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အခုလို သမ္မတထရန့်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ အဆင့်အမြင့်ဆုံး တာဝန်ရှိသူတဦးကို တရားစွဲဆိုပြီး အမိန့်မချမှတ်ခင် ထောင်ထဲထည့်လိုက်မှုအပေါ် အထူးစစ်ဆေးရေးကောင်စီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရုရှား ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်တွေကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ဖိအားပေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ရှူမြင်နေကြပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အကြီးအကဲ ကို ထောင်ထဲပို့